Fampidirana ireo paikady sy fianarana momba ny fakan-tsary amin'ny vatana | Vahaolana OMG
Fampidirana ireo tetika sy fianarana momba ny fakantsary miendrika vatana
Ny fivoaran'ny fakantsary efa nitafy vatana dia efa nisy fiantraikany amin'ny fanaovana polise, ary hitombo izany fiantraikany izany rehefa mihamaro ny masoivoho mampihatra an'io teknôlôjia io. Ny fanapahan-kevitra hampihatra fakan-tsary mifono vatana dia tsy tokony ho voahaja tsotra izao. Indray mandeha ny masoivoho iray dia midina amin'ny làlan'ny fakan-tsary amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ary rehefa tonga ny besinimaro manantena ny fisian'ny raki-tsarimihetsika. Ho sarotra ny hanana eritreritra faharoa na hamerina ny fandaharana amin'ny fakan-tsary miakanjo. Ny departemanta misahana ny polisy izay mamoaka fakan-tsary miakan-doha no manao fanambarana fa mino ny fihetsik'ireo manamboninahitra ny resaka firaketana ampahibemaso. Amin'ny fiatrehana ireo fanamby sy fandaniana amin'ny fividianana sy fametrahana rafitra fakan-tsary manana vatana, famolavolana politika ary fanofanana ireo manampahefana momba ny fampiasana ireo fakan-tsary, ny departemanta iray dia manangana antenaina mitaky valin-kafatra mety hataon'ny mpikambana ao amin'ny vahoaka sy ny fampitam-baovao. ny asan'ny manamboninahitra. Ary miaraka amin'ireo fehintsoratra voafetra izay horesahina amin'ity famoahana ity, ny horonantsary misy sary fakantsary fiakaran'ny vatana dia tokony ho azon'ny besinimaro amin'ny fangatahana tsy noho ny firaketana an-tsary fotsiny fa noho ny fanaovana izany dia ahafahan'ny departemantan'ny polisy manaporofo ny fangaraharana sy ny fisokafan'izy ireo. fifandraisana amin'ny mpikambana ao amin'ny vondron'olona.
Nandritra ny herintaona lasa izay, ny Forum Research Executive an'ny Polisy (PERF), miaraka amin'ny fanohanan'ny Office of Justice Office of Community Oriented Policing (COPS Office), dia nanadihady ny fampiasana fakantsary volo amin'ny vatan'ny polisy. Ny PERF dia nanadinadina mpitantana polisy maherin'ny 40 izay manana traikefa amin'ny fakantsary mitafy vatan'olombelona, ​​nanadihady ny politikan'ny fakantsary volo mihoatra ny 20 natolotry ny masoivohon'ny polisy, ary nanatontosa fihaonambe iray andro tany Washington, DC, izay nisy sefon'ny polisy 200 mahery. , manam-pahaizana, manampahefana ambony momba ny fitsarana federaly, ary manam-pahaizana hafa no niresaka ny zavatra niainany tamin'ny fakantsary mitafy vatana.
Mampiasa fakan-tsary amin'ny vatana amin'ny fomba isan-karazany ny masoivoho mpampihatra lalàna: hanatsarana ny fanangonana porofo, hanamafisana ny asa ataon'ny tompon'andraikitra sy ny fandraisana andraikitra, hanatsarana ny fangaraharahan'ny masoivoho, hanoratana ny fihaonan'ny polisy sy ny vahoaka, ary ny fanadihadiana sy famahana ireo fitarainana sy ireo tranga voarohirohy am-pahefana.
Soso-kevitra amin'ny ankapobeny
Ny masoivoho fampiharana isan-karazany dia samy hafa, ary izay miasa ao amin'ny departemanta iray dia mety tsy ho azo tanterahina amin'ny hafa. Mety hitan'ny masoivoho fa ilaina ny mampifanaraka ireo tolo-kevitra ireo hifanaraka amin'ny filàn'izy ireo, ny teti-bola sy ny fetran'ny mpiasan'ny fahazoan-dàlana, ny takian'ny lalàna ary ny fomba fiasa filozofia amin'ny raharaha momba ny fiainana manokana sy ny fanaovana politika.
Rehefa mamolavola ny fakan-tsary mifehy ny vatana, ny PERF dia manome soso-kevitra fa ny masoivohon'ny polisy dia mifampidinika amin'ireo tompon'andraikitra voalohany, ny sendika eo an-toerana, ny mpanolotsaina ara-dalàna, ny mpampanoa lalàna, ny vondrona vondrona, ny mpiray tsikombakomba eo an-toerana, ary ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fampidirana fampidirana avy amin'ireto vondrona ireto dia hampitombo ny maha-ara-dalàna ny politikan'ny fakan-tsary mifehy ny vatan'ny departemanta ary hanao tsara ny fizotran'ny fampiharana ho an'ny maso ivoho izay manaparitaka ireto fakantsary ireto.
Ny politika dia tokony hilaza mazava hoe iza no olona notendrena na avela hanana fakan-tsary mifono vatana sy izay toe-javatra iainana.
Raha manolotra fakan-tsary amin'ny tompon'andraikitra an-tsitrapo ny masoivoho iray dia tokony hametra ny fepetra manokana izay mety hitaky fitafiana ny manampahefana iray.
Ny masoivoho dia tsy tokony avelan'ny olona mampiasa fakantsary fiakanjo an'olon-tsotra nefa miasa.
Ny politika dia tokony hamaritra ny toerana misy ny vatan'ny fakan-tsary.
Ireo tompon'andraikitra manetsika ny fakan-tsary mihetsika ho an'ny vatana mandritra ny fiasa dia tokony ho voamarika ny fisian'ny firaketana an-tsoratra ao amin'ny tatitra ofisialy.
Ireo tompon'andraikitra manao fakan-tsary mitazona vatana dia tokony takiana amin'ny fakantsary na amin'ny fanoratana ny sainy raha toa ka tsy mirakitra an-tsoratra ny hetsika tokony hotakian'ny politikam-panjakàna izy ireo.
Ireo lesona ianarana momba ny raharaha momba ny fiainana manokana
Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny zon'ny vahoaka manokana, indrindra raha momba ny firaketana ireo resadresaka niharam-boina, ny fihenany ary ireo lohahevitra saro-pady ary rehefa mirakitra an-tsoratra ao an-tranon'ny olona izy. Ny masoivoho dia tsy maintsy manantitrantitra ireo fiheverana manokana momba ny tsiambaratelo ireo amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fotoana anoratana, aiza sy ny halavan'ny mitahiry angon-drakitra, ary ny fomba hamaliana ny fangatahan'ny vahoaka amin'ny horonantsary horonantsary.
Rehefa ny mpiandraikitra dia ilaina ny manodina ny fakan-dry zareo, ny fomba fanao mahazatra dia ny manampahefana no raikitra an-tsoratra ny antso rehetra momba ny serivisy momba ny serivisy sy ny fampiharana ny fampiharana ny lalàna ary hampihena ny fakan-tsary amin'ny faran'ny vanim-potoana fotsiny na amin'ny fankatoavan'ny mpanara-maso.
Zava-dehibe ny hamaritana mazava tsara ny hoe misy fihaonana na hetsika mifandraika amin'ny fampiharana ny lalàna ao amin'ny politikan'ny fakan-tsary nosoratan'ny departemanta. Ilaina ihany koa ny manome lisitry ny hetsika manokana ampidirina, manamarika fa tsy voatery tafiditra ao anaty lisitra ny lisitra. Ny masoivoho maro no manome fahazoan-kevitra ankapobeny amin'ny manampahefana fa raha misalasala izy ireo dia tokony hosoratany.
Ho fiarovana ny fiarovana ny manampahefana ary ekena fa mety tsy ho vita ny firaketana an-tsoratra, dia ilaina ny manambara amin'ny politika fa tsy ilaina ny firaketana raha tsy azo antoka, tsy azo atao ary tsy azo tanterahina.
Ny ahiahy momba ny tsiambaratelo lehibe dia mety hitranga rehefa miresaka amin'ny olona iharan'ny heloka bevava, indrindra amin'ny toe-javatra misy ny fanolanana, fanararaotana, na olana saro-pady hafa. Ny masoivoho sasany dia te hanome ny manam-pahefana manam-pahefana mikasika raha mirakitra an-tsoratra ireo toe-javatra ireo. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, tokony handray an-tanana ny lanjan'ny firaketana an-tsoratra sy ny fahavonon'ilay nihaino hiteny amin'ny fakantsary ny tompon'andraikitra. Ny masoivoho sasantsasany dia mandehandeha kokoa ary mitaky manampahefana handray ny faneken'ilay niharam-boina alohan'ny handraisana an-tsoratra ny dinidinika.
Mba hampiroboroboana ny fandraisana andraikitra ataon'ny manampahefana, ny ankamaroan'ny politika dia mitaky ny manampahefana antontan-taratasy, amin'ny fakantsary na an-tsoratra, ny antony nahatonga ny tompon'andraikitra nanongana ny fakantsary amin'ny toe-javatra izay takiana amin'ny firaketana.
Rehefa manapa-kevitra momba ny toerana fitehirizana fakan-tsary amin'ny fakan-tsary mifototra amin'ny firy, hafiriana hitazomana azy io, ary ahoana ny fomba tokony hampahafantarina izany amin'ny vahoaka, dia tsara raha tokony hifampidinika amin'ny masoivoho sy mpanolotsaina ara-dalàna ny departemanta.
Ho fanampiana amin'ny fiarovana ny zon'ny fiainana manokana dia tsara kokoa ny mametraka fotoana fohy kokoa amin'ny fihazonana azy ho an'ny rakitra tsy miharihary. Ny ora fihazonana matetika indrindra ho an'ity horonantsary ity dia eo anelanelan'ny 60 sy 90 andro.
Ireo lesona nianatra momba ny fiantraikan'ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina
Hitan'ny masoivoho fa mahomby amin'ny fifampiresahana amin'ny vahoaka, ny mpanao politika eo an-toerana, ary ireo mpandray anjara hafa
mikasika ny ho fampiasan'ny fakantsary ary ny fiantraikan'ny fakantsary amin'izy ireo.
Ny media sosialy dia fomba mahomby hanamora ny firotsahan'ny vahoaka.
Ny fangatahana manampahefana dia mirakitra ny antso momba ny hetsika momba ny serivisy sy ny fampiharana ny lalàna fa tsy ny fihaonan'ny besinimaro dia afaka manome antoka ny tompon'andraikitra tsy terena hitantara ireo karazan-dresaka resahina izay ivon'ny fananganana fifandraisana tsy ara-potoana ao anaty vondron'olona.
Ny firaketana ny zava-nitranga tamina sehatra niaina velona dia afaka manampy ireo manamboninahitra handray ny fanambarana an-tsitrapo sy fahatsapana mety ho ilaina amin'ny fanadihadiana na fanenjehana taty aoriana.
Ny fitrandrahana ny vondron'olona alohan'ny fampiharana ny programa amin'ny fakantsary dia afaka manampy amin'ny fanohanana ny programa ary mampitombo ny maha-ara-dalàna ny programa eo amin'ny vondron'olona.
Mangataka ireo manamboninahitra mba hanadihady, amin'ny fakantsary na an-tsoratra, ny antony nanoloran'izy ireo ny fakantsary tamin'ny toe-javatra izay takiana amin'ny firaketana an-tsoratra ny fampiroboroboana ny fandraisana andraikitra ataon'ny manampahefana.
Nianatra momba ny famahana ny olan'ny manamboninahitra ny lesona
Tahaka ny fampielezana ny teknolojia, programa, na paikady vaovao, ny fomba faran'izay tsara indrindra dia ny ezaka ataon'ireo mpitarika ny masoivoho mba hampiditra mpiasa amin'ny lohahevitra, hazavao ny tanjona sy ny tombontsoan'ny hetsika, ary hamaha ny olana rehetra mety ho azon'ireo manamboninahitra.
Ny famelabelarana, antso an-tariby ary fihaonana amin'ny solontena sendika dia fomba mahomby amin'ny fampitana vaovao momba ny programa fakan-tsary mifono vatana.
Ny famoronana ekipa fampiharana izay misy ireo solontena manerana ny departemanta dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ny maha ara-dalàna ny programa ary ny fanamorana ny fampiharana.
Ny fakan-tsary miakanjo vatana dia mety ho fitaovana fampianarana mandritra ny famerenan'ny mpanara-maso ny fizahana sary miaraka amin'ireo manampahefana ary manome valiny mahasoa.
Ny halavan'ny fotoana voarakitra an-tsoratra dia hihazona ny masoivoho amin'ny toe-javatra isan-karazany.
Ny fomba sy ny paikady amin'ny fidirana sy ny famerenana ireo angon-drakitra voarakitra, ao anatin'izany ny olona omena alalana hiditra amin'ny angon-drakitra sy ny toe-javatra izay azo jerena.
Politika momba ny famoahana ireo angon-drakitra voarakitra an-tserasera ho an'ny besinimaro, ao anatin'izany ny fihetsiketsehana momba ny fanitsiana sy ny famaliana ny fangatahana ampahalalana.
Raha fintinina, ny politika dia tsy maintsy manaraka ny lalàna sy fitsipika rehetra misy, ao anatin'izany ireo fanangonana sy fihazonana ny porofo, ny fampahafantarana ny besinimaro, ary ny fanekena. Tokony ho voafaritra tsara ny politika mba hanomezana torolàlana mazava sy tsy miova ho an'ny manampahefana nefa mamela malalaka ho an'ny fahafaha-manao rehefa mihamalalaka ny fandaharana. Ny masoivoho dia tokony hanome ny politikam-bahoaka ho an'ny besinimaro, tsara indrindra amin'ny alàlan'ny famoahana ny politika ao amin'ny tranokalan'ny masoivoho.
Rehefa ampiharina tsara, ireo fakan-tsary mifono vatana dia afaka manampy amin'ny fanamafisana ny asan'ny polike. Ireo fakantsary ireo dia afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny fandraisana andraikitra amin'ny masoivoho sy ny fangaraharana, ary izy ireo dia mety ho fitaovana ilaina amin'ny fampitomboana ny maha matihanina ny mpiasa, ny fanatsarana ny fiofanana ho an'ny manamboninahitra, ny fitahianana ny porofo ary ny fitsapankevitra amin'ny fihaonana amin'ny vahoaka. Saingy, manangana olana ho zavatra azo ampiharina sy amin'ny ambaratonga politika ihany koa izy ireo, tokony hijerena ny masoivoho roa ireo. Ny masoivoho pôlisy dia tsy maintsy mamaritra hoe inona ny hevitry ny fakan-tsary mifono vatan'olona amin'ny resaka fifandraisana eo amin'ny polisy, ny fiainana manokana, ny fahatokisana ary ny maha-ara-dalàna, ary ny fitsarana ara-pitsarana anatiny ho an'ny manamboninahitra.
Ny masoivoho pôlisy dia tokony hampiasa fomba fitomboana amin'ny fampiharana ny programa fakan-tsary mifono vatana. Midika izany ny fitsapana ireo fakan-tsary amin'ny fandaharan'asan'ny mpanamory ary manamboninahitra mpiandraikitra sy ny vondron'olona mandritra ny fampiharana. Midika koa izany ny famoronana tamim-pitandremana ny politikam-pakan'ny fakan-tsary mifono vatana izay mandanjalanja ny fandraisana andraikitra, fangaraharana ary zon'ny fiainana manokana, ary koa fiarovana ny fifandraisana manan-danja eo amin'ny manamboninahitra sy mpikambana ao amin'ny vondron'olona.
Hita amin'ny: https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Technology/implementing%20a%20body-worn%20camera%20program.pdf
Fampidirana ireo tetika sy fianarana momba ny fakantsary miendrika vatana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
4369 Total Views 1 Views Today